Lamaane aroos ahaa oo qarax ku dhintay iyaga oo u soo socda Muqdisho - Awdinle Online
Lamaane aroos ahaa oo qarax ku dhintay iyaga oo u soo socda Muqdisho
February 04, 2020 (Awdinle Online) – faah faahin ayaa ka soo baxaysaa qarax dad rayid ah ku dhinteen oo shalay galab ka dhacay Deegaanka Lafoole ee duleedka xamar, oo ay dhex marto wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Ilaa shan qof oo la socday gaarigan oo ahaa nooca raaxada ayay miinada kula kacday meel aan ka fogayn Isbitaalkii Drs Xaawo Cabdi, iyadoo ay halkaasi ku geeriyoodeen dhammaanba dadkii gaariga saarnaa, oo darawalkiina uu ka mid yahay.
Gaariga iyo dadkan oo ka yimid xaafadda Malable ee Degmada Wanlaweyn ayaa waxay ku sii jeedeen Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya shanta qof ee ku dhimatay qaraxa in ay ku jireen wiil iyo gabar iska soo mehersaday Degmada Wanlaweyn, iyagoo markii horeba ka tagey Magaalada Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa tilaamaay in qaraxa loola dan lahaa gaari Ciidan nooca loo yaqaan Cabdi Bille, oo ay la socdeen Ciidamada Dowladda, hase ahaatee uu haleelay gaarigii ay rayidka saarnaayeen oo daba socday.
Qaraxan ayaa ku soo aadaya, xilli Dowladda Soomaaliya ay ciidankii ugu badnaa ku soo daadisay wadada isu xirto Muqdisho iyo Afgooye, si looga hortaggo weerarada Al-Shabaab ee ka dhanka ah Injineerada Turkiga, ee dhiseysa wadada.
Isla maanta dad kaloo aroos u socday ayay gaarigoodii miino ku haleeshay wadada xiriirisa Degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee Gobolka Jubbada Hoose. Inta la ogyahay waxaa ku dhintay afar qof, halka lix kalena ay ku dhaawacantay.
Previous articleThe Tension Between Rwanda and Uganda Solved, Prisoners Release
Next articleMadaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi oo Geeriyoodey